Iipropati eziwusizo zezityalo, i-oatmeal ayicinezeli
"Yintoni le, iphalishi?" "Oatmeal, mnumzana!" Njengeqhawe likaNikita Mikhalkov, abanye bethu baqhaqhaqhazela ukubona kweso sakusihlwa. Kwaye kungenanto-kuba iluncedo, ilungile kwaye ikulungiselelwe ngokukhawuleza. Nazi ezinye ii-poratges ze-oatmeal zihluke ... Iipropati ezisetyenziswayo zeeatmeal ziyaziwa ekupheleni kweenkulungwane.
I-Oatmeal yintoni okufunekayo kusasa! Kuye kwabonakaliswa ukuba abo bangayigxiliyo kwasekuseni bayakwazi ukuqonda, banokuba neengxaki ezimbalwa ngobunzima obuninzi kunye nomoya ongcono kunabo abakhohlwa ukuzihlaziya ngokwabo. Kodwa kutheni i-oatmeal porridge?
Izizathu ezinhlanu zokuthandana ne-porridge:
Le cereal iqukethe i-carbohydrate engama-60% kunye neeprotheyini ezininzi (14-15%) - oko kuthetha ukuba uya kuba namandla okwaneleyo ixesha elide.
I-Oatmeal icebile kwiivithamini B, B2, PP, kunye nezinto ezimbiwa ngamaminerali: i-potassium, i-magnesium, i-phosphorus, i-iodine kunye nentsimbi. Izazinzulu zaseBrithani zenza isifundo: ngenyanga leyo, iqela lamavolontiya aneminyaka engama-30 ukuya kuma-80 ubudala londliwa imihla ngemihla. Iziphumo zigqithisile ukulindela - iveki kamva, bonke abantu baphucula ukusebenza kwengqondo, kunye "nemiphumo emibi" yabonisa uvuyo kunye nemimoya ephakamileyo.
I-oatmeal porridge ibaluleke kakhulu kwizigulane ezinezibilini zesisu okanye emathumbu, emva kokuhlinzwa kunye ngexesha lokugula. Ukuba ugqirha ugqibe ukutya okufudumele nokukhuselekileyo, yidle i-oatmeal kwaye ngokukhawuleza uye kwisilungiso! Siyabonga i-polysaccharide betaglukanu iplate ye-oat flakes iza kunceda ukunciphisa i-cholesterol ngo-8-23%. I-oat flakes zibonelela ukuhlambuluka komzimba kwi-toxins eyingozi, ukunciphisa amathuba okudityaniswa, kunye nokulawula izinga leshukela legazi.
Kuvela ukuba xa kukho iphariji rhoqo ekuseni kunye ncinane kancinci emini, ngokuyifakela ngeetyuksi eziqhelekileyo, ke iikhilogram ezimbalwa ziya kuhamba ngokwazo. Kwiintlobo ezininzi ngenxa yefiber, e-oat flakes yi-1.3%. Kufana ne-brush epholileyo, ihlambulula amathumbu, ivula iindonga zesisu kwaye inika umvakalelo wesifo. Kwaye i-oat flakes ine-index ye-glycemic index. Oku kuthetha ukuba bazalisa, ngokukhawuleza bakhulisa izinga leswekile (kwaye kungekhona ngokukhawuleza, njengama-carbohydrate alula - iswekile nesonka). Ngako oko, uya kufuna ukutya kungekudala, kwaye i-pancreas iya kumisa "ukufuna" into enhle.
Ukuba awukwazi ukwabelana nalo mbono, mhlawumbi awukwazi ukuwupheka? Thela i-oat flakes ngamanzi abilayo okanye ubisi olufudumeleyo, yongeza ushukela kunye netyuwa ukunambitha. Emva koko udibanise ngomlilo omncinci, uvuselele rhoqo, de kube i-flakes ilandele yonke imveliso. Musa nje ukuvumela i-porridge ubilise, mhlawumbi iya kuba yome kakhulu. Emva koko faka i-spoonful ibhotela, iziqwenga zeziqhamo zakho ozithandayo okanye amajikijolo, iinqabileyo, i-nut okanye ubusi-kwaye ukutya okumnandi kukulungele. Akunanto ngenxa yokuba wakhethwa ekudleni kwasekuseni ngabaphathi. Kwaye kunye ne-oat flakes ulungiselele i-muesli, i-cookies, i-fritters, isonka kunye ne-dessert.
I-oatmeal yokuqala, engadingi ukupheka, yaveliswa kwiminyaka engama-80 ekhulwini le-XIX e-England. Ingcamango yayo "yayingathathi hlangothi" yokuba yaba yimbangela yokuhlekwa kweentlanga phakathi kwabanye abantu baseYurophu. Kwaye i-porat oatmeal yokuqala yokuchithwa ngokukhawuleza yaqulunqwa kakhulu kwiphondo elisenyakatho yeRashiya. Iinqwelo zokuqala iintsuku ezixakekile kwaye zide ziphelile kwivenkile yaseRashiya. Iingqolowa ezivuthayo ezitshisayo zomiswa ngaphambi kokumnyama. Umgubo obangelwayo wawushushu, ucoceko.
Ukusetyenziswa okanye ixesha?
Ngelishwa, amanqaku amaninzi athobayo malunga ne-oatmeal "porter" ayinakunikwa. Uluhlu lwe "Hercules" luhlobo olupheleleyo, okuvela kuyo kuphela ama-husks amaqhekeza, kunye nenxalenye ebalulekileyo yegobolondo kunye nombungu, oqulethe zonke izinto ezibalulekileyo, zihleli. Kodwa i-"yangoko" yokutya kwinkqubo yokusebenza ixesha elide ilahlekelwa zizinto ezininzi ze-bioactive kunye ne-fiber dietary. Ukususela kwinqwelo ye-oat kuneemvumba ezincinci, ezityebi ngaphandle kokuba isitashi. Ngako oko, ukusetyenziswa okungaphantsi kwakucatshulwa, ngoko ke luncedo ngakumbi. Igama elikhethiweyo malunga nezongezo zesongezelo. Umthamo wezityalo kuwo awunanto yokusetyenziswa, kwaye "iifayile ezifana nezendalo" azifunelanga ngokupheleleyo umzimba. Kukho inzuzo-ixesha lokupheka. Lapha ukhetho lenu. Yintoni ebaluleke kakhulu kuwe-inzuzo okanye ixesha? Uninzi ityuwa - kwaye i-porridge yayinamandla kangangokuba kwakunokwenzeka ukuloba imifanekiso yamadoda okanye intlanzi kuyo, njengokungathi kwintlama. Iikhompyutha zobugcisa zanamhlanje zivumela ukuba uguqule i-oat grains zibe ngamaflethi aphilileyo okupheka ngokukhawuleza. Ukwenza oku, nganye i-oatmeal kuqala ihlanjululwe kwaye ifakwe. Emva koko, imbewu ihlihliwe, ifakwe kwi-machine roller kwaye yomiswe. Ubukhulu beentlaka ezifunyenweyo akufanele zidlule kwi-0.3-0.5 mm.
Namhlanje kwiivenkile zethu zineentlobo ezimbini ze-oatmeal porridges - "ngokukhawuleza" (okumele kuqhutyelwe imizuzu embalwa okanye ifakwe emathunjini) kunye "kwangoko" ("ngokukhawuleza"), engadingi ukupheka. Kuba "ukutya okuzenzekelayo" iiflethi ezigqwesileyo zifunekayo - isantya sokuphuza sincike ekubuneni kwe-petal. Kanti ke uye kwiindlela zobuqhetseba - xa uphawula iincinci zeengqungquthela, zenze zifakwe okanye zinyanzeliswe. Isimo sesibini sokugunyazwa kwiphulo "esheshayo" yonyango lwe-hydrothermal. Kule nto, izityalo zihamba ngeemitha ezingama-30-70 kwiqondo eliphezulu kunye noxinzelelo okanye ubilisiwe kwiibilisa ngexabiso elincinci lamanzi. Indlela yesithathu - unyango kunye nemirhumo ye-infrared - ihlala ngaphantsi kweminithi kwaye iphinde iphucule kakhulu ukufaniswa kwe-porridge. Kubuhlungu ukuba ide isasazeka ngokubanzi. Isigaba esilandelayo - ukoma - kubaluleke kakhulu. Ukuxhomekeka kwexesha elizayo le-porridge kuxhomekeke kuyo. Iiflegi ezinomileyo kumaqondo aphezulu. Kwiindawo ezininzi ze-porridges "zangoko", faka iinqununu zezitshizi okanye izithelo, amantongomane, ukhilimu. Sifanele sithulule amanzi okubilisa ngamapilishi - kunye nomzuzu kamva, silungile.
Isonka ngummiselo ocolileyo kwaye unempilo
Ukutya okwelapha i-psoriasis
I-Nutmeg: izakhiwo ezixhamlayo
Iingcebiso zokukhetha iimveliso zesikhumba
Isifo Sentliziyo - Iimoto Zengunaphakade
Ukuhluthwa kweBalinese ukukhuthazwa kwezempilo
Indlela yokufumana umfanekiso ogqwesileyo kwi-50: eyimfihlelo ephezulu evela eHalle Berry
I-Salmon ibhaka kwi-pastry
Indlela yokuziphatha ngokufanelekileyo kunye ne-bitch?
Indlela yokukrazula i-cellulite?
Ukunciphisa imililo esebenzayo